Toeram-pisakafoanana an-tserasera frantsay - Kaody Bonus Bonus amin'ny Internet
(235 vato, average: 4.99 avy tany 5)
Loading ...Mahagaga fa any Paris sy ny manodidina azy dia tsy misy filokana. Izany dia noho ny lalàna frantsay ankehitriny, ny trano filokana dia tsy azo apetraka afa-tsy amin'ireo faritra nahazo ofisialy ny toeran'ny toeram-pialantsasatra ary avy any Paris, amin'ny halavirana maherin'ny 100 kilometatra. Ny hany mampiavaka azy dia ilay casino any Engen. Ity faritra fialantsasatra ity dia 14 km miala ny Champs Elysées. Ny filokana misokatra ao Engen-les-Bains dia tamin'ny 1901. Taorian'ny 10 taona dia nosokafana ilay teatra ary tamin'ny fotoana ady dia teo ny hopitaly. Tamin'ny taona 1988 dia novidian'ny Groupe Lucien Barrière izy io. Tamin'ny taona 2001 dia namboarina tanteraka ilay trano ary nisy kasino vaovao nosokafana tamin'ny aprily 2002. Ny atin'ny Casino dia namorona ilay mpamorona malaza Jacques Garcia. Noravahany ny loharano fanazavana ny casino, valindrihana misy kintana, farihy ary fanaka mahafinaritra. Hatramin'izao, trano filokana any Engen - ny trano filokana ahazoana tombony be indrindra eto Frantsa. Izy io dia manana latabatra ho an'ny poker stud, blackjack, ary koa ny roulette anglisy sy frantsay ary lalao hafa. Misy milina slot ihany koa.
Lisitr'ireo Topn'ny Top Casino amin'ny 10 frantsay Online
Slot machines amin'ny casinos en Engen-les-Bains
Ny fananganana filokana voalohany any Frantsa dia nanokatra azy io tany Paris tamin'ny taonjato faha-17. Ity hetsika ity dia nitana andraikitra lehibe tamin'ny fampiroboroboana ny indostrian'ny filokana, tsy any Frantsa ihany fa manerana an'izao tontolo izao. Voalohany, ny filokana dia fomba iray hamenoana ny tahirim-bolam-panjakana, ny tombony ara-toekarena amin'ny fisian'ireny andrim-panjakana ireny dia miharihary, noho izany, nanomboka niseho ho kasino vaovao. Aorian'ny Revolisiona frantsay dia voarara ny casino, avy eo malaza indray. Ny filokana kasino voalohany dia tsy afaka miloka afa-tsy filokana sy roulette vitsivitsy, fa amin'ny fivoaran'ny indostrian'ny filokana dia nanitatra ny filokana natolotra. Raha ny marina, ankehitriny mankafy ny lazan'izany laza izany dia noforonina ny roulette, raha ny filazan'ny ankamaroan'ny mpahay tantara dia tany Frantsa izany. Ny toetrany noforonina Blaise Pascal, filozofia ary matematika izay niasa tamin'ny famoronana hetsika maharitra.
Androany ao Frantsa dia misy vondrona dimy, izay an'ny casino lehibe indrindra ao amin'ny firenena:
- Groupe an'i Lucien Barrière;
- «Transhan» tranainy.
Ny sasany amin'ireo andrim-panjakana ireo dia misy kasino Barrièrede Deauville, izay misy ao amin'ny tanànan'i Deauville. Ny tantaran'ity casino ity dia efa ho 150 taona lasa izay. Tamin'ny 1864 no nahitana azy, izy no nampiditra ny Duc de Morny, saingy ratsy ny asan'ny kasino ary nakatona izy io. Ny fahitana vaovao an'ity andrim-panjakana ity dia nitranga sahady tamin'ny 1912. Ho azy dia natsangana trano vaovao amin'ny fomban-drazan'ny rafitr Atena, io trano io dia hita ankehitriny. Ity toerana casino ity dia nanjary toerana ankafizin'ny crème an'ny fiarahamonina frantsay sy anglisy, ary koa mpandraharaha sy olo-malaza maro. Ity lalao ity - mariky ny hakanton'ny frantsay sy ny haitraitra. Androany, ny andrim-panjakana dia manana zanak'anabaviny Lusena Barrier, izay nomena anarana ho fanomezam-boninahitra ny fametrahana filokana. Ity filokana ity dia manana filokana betsaka: milina slot 325 sy latabatra filalaovana 24 ho an'ny lalao any Punto Banco, Roulette, Blackjack, craps, sy ny hafa. Misy ihany koa ny fisotroana telo, trano fisakafoanana telo, fanasana amin'ny fanasana sy fihaonambe, ny trano fandraisam-bahiny seza fitonjato. Ny fandehanana any amin'ny trano filokana dia mila manolotra antontan-taratasy momba ny tena sy mandray anjara amin'ireo lalao amin'ny latabatra izay tokony hisoratra anarana aloha.
Ny Casino «LE LYON VERT» dia nosokafana tamin'ny taona 1882, ary tamin'ny 1991 dia nanomboka tafiditra tao amin'ny vondrona Partouche izy. Any Lyon no misy azy. Ity fananganana filokana ity dia misy efitrano filokana goavambe, trano fisakafoanana ary hotely kely. Ao amin'ity casino ity toy ny any amin'ny orinasa filokana hafa any Frantsa, misy milina filalaovana maro an'isa: poker video, misy 174 sy 224 nametraka ny lozisialy mekanika. Misy ihany koa ny fotoana azo lalaovina amin'ny lalao amerikana sy eropeana, poker Texas Hold'em, blackjack ary lalao hafa mety hitranga. Mandritra ny fiatoana dia azonao atao ny mipetraka ao amin'ny trano fisakafoanana, mankafy ny fahandroana tsara.
Ny Casino Aix-en-Provence, fantatra kokoa amin'ny anarana hoe Pasino, dia nosokafana tamin'ny taona 1923. Ny fananganana azy dia lasa tetik'asa fanamboarana an-drenivohitra lehibe novolavolain'ny Kaominina. Ny tetik'asa dia ny trano filokana, hopitaly mafana, lapa lehibe ary zaridaina tsara tarehy. Ny Casino Pasino dia afaka milalao lalao isan-karazany amin'ny kisendrasendra, ao anatin'izany ny fahafaha-milalao amin'ny milina filokana, poker video, roulette ary horonan-tsary, ho fanampin'izany, kilalao karatra maro karazana sy fialamboly hafa. Misy hatrany ny hetsika fialamboly marobe, ao anatin'izany ny kaonseritra sy fampisehoana isan-karazany, ny teatra.
Ny casino SEVEN lehibe indrindra any Frantsa, izay mirefy 650 metatra toradroa, dia mahavariana noho ny habeny, ary koa ny fialamboly sy ny haingo ivelany sy ny haingon-trano anatiny. Azo ampitahaina amin'ny hatsaran'ny diamondra io. Izy io dia manondro andian-taranaka vaovao filokana. Ao amin'ny atiny, ny hevitra momba ny filokana dia nisy akony teo amin'ny tantaran'i Roald Dahl's "Charlie sy ny Chocolate Factory". Ny filokana dia tsy afaka milalao kilalao hahazoana vintana fotsiny, fa koa mba hankafy karazana fialamboly hafa.
Ny Casino «Cannes Croisette» izay miorina ao afovoan'ireo Palais des Festivals malaza any Cannes, dia manana vondrona Lucien Barrière. Ny velarantany manontolo amin'ny fananganana lalao dia 3,000 metatra toradroa. Ny efitrano lalao dia voaravaka amin'ny fomba maoderina. Ao amin'ny efitranon'ny casino dia afaka milalao lalao toy ny poker, blackjack, roulette, baccarat ary milina slot ianao ao. Ny faritra filokana dia misy bara maro, trano fisakafoanana gastronomika ary trano fandihizana. Afaka mamandrika efitrano ao amin'ny hotely ianao.
Lalao any Frantsa
Tokony hiteny hoe "Paris" sy "Tower Eiffel", satria am-po maro no manomboka mitempo haingana kokoa ary mandoko sary am-pitiavana ny sary an-tsaina. Androany ny CasinoToplists dia hitsidika ny tanin'ny fitiavana sy ny fahalalahana - France. Ka noho izany, ny famaritana ny fomba fiteny malaza iray, dia anjarantsika ankehitriny "ny mahita an'i Paris sy milalao."
France - teny vitsivitsy momba ny tantara sy ny jeografia;
ny casino gambling ara-dalàna izay hita any amin'ny faritra manodidina;
Andraikitry ny minisiteran'ny atitany izany.
Ny casinos malaza indrindra any Frantsa:
Club Aviation Club de France ao Paris;
Casino Enghien 14 km avy any Paris;
trano filokana ao Megève Mont Blanc.
Efatra dimy tao Paris miaraka amin'ny adiresy;
Ny toerana misy an'i Frantsa, ary tantara ara-tantara fohy
France - firenena mahavariana any Eropa Andrefana dia efa niaina fotoan-tsarotra maro, nefa nivadika ho iray amin'ireo aina milamina sy azo antoka indrindra manerantany. Ny anarana feno an'ny fanjakana - ny Repoblika frantsay. Any Frantsa, ny zon'ny vahoaka sy ny firenena manokana ho an'ny vahoaka. Teny filamatra - "Fahafahana, fitoviana, firahalahiana."
Ny filoham-pirenena dia ny filoha, Francois Hollande, saingy betsaka ny fahefana natolotra ny praiminisitra Manuel Valls. Androany, olona maherin'ny 66 tapitrisa ao Frantsa, izay 90% - ny olom-pirenenan'ilay firenena. Ny firafitry ny firenena dia maro loko sy isan-karazany, na eo aza ny zava-misy fa ny frantsay no nanjakazaka. Betsaka ny Alsatians, lotaringtsev, anglisy, jiosy, Flemish, Catalans, Basques, Corsicans, Armeniana.
Ny renivohitr'i Frantsa - Paris mahafinaritra, izay, araka ny fantatrao, hahita sy ho faty am-pilaminana. Ny tantaran'ny renivohitra maoderina, izay misy olona manodidina ny 2.5 tapitrisa, dia nanomboka tamin'ny taonjato III talohan'i Kristy. f. Ivotoerana ara-kolontsaina, ara-tantara, ara-toekarena ary politika tena tsara izy ity, manaitra ny hatsaran-tarehiny sy ny hatsarany.
I Frantsa dia manondro ny filokana ho an'ny olom-pireneny sy ny mpitsidika azy, ao amin'ny faritry ny trano filokana sy trano filokana marobe, nefa koa ny fitsipiky ny fikambanan'izy ireo somary henjana. Andao hanadihady.
Casinos sy filokana ao Frantsa
France - iray amin'ireo firenena mampidi-doza indrindra eto an-tany, ary ny frantsay - iray amin'ireo mpilalao mamoy fo indrindra. Filokana maro no niseho teto.
Raha ny tokony ho izy, ny ankamaroan'ny trano filokana eto amin'izao tontolo izao, eny fa na ny haba aloany amin'ny lahatsoratra toy ny “lalao frantsay” aza. Ny iray amin'ireo karazana roulette dia antsoina koa hoe "French Roulette" (fantatra koa amin'ny hoe European Roulette); ary eo amin'ireo karazana rolika, ny frantsay naimenshee dia manana tombony amin'ny casino, izay tsy afaka manadino ny mpankafy ny lalao.
Toy ny any amin'ny ankamaroan'ny firenena eropeana, any Frantsa, fihetsika manokana manoloana ny filokana. Notsarain'izy ireo ara-dalàna, saingy amin'ny faritra voatondro manokana no ahafahanao milalao. Ny Casino dia hisokatra manomboka amin'ny 1942 any amin'ireo toerana misy anao ihany izay manana ny toeran'ny toeram-pialantsasatra amin'ny fomba ofisialy, saingy tsy maintsy esorina ao Paris tsy latsaky ny 100 km izy ireo.
Talohan'ny nandraisana ny lalàna tao amin'ny firenena dia trano filokana marobe, ary ny ankamaroany dia tsy maintsy nakatona. Androany dia miasa amin'ny fomba ofisialy ny trano filokana 197, izay tantanan'ny Ministeran'ny Atitany avokoa. Fanaraha-maso ireo andrim-panjakana, ny fizotran'ny lalao sy ny serivisy apetraka mihoatra ny matotra.
Ny fanapahan-kevitra momba ny fisokafan'ny casino vaovao dia manome ny minisitry ny atitany manokana manokana, fa ny fahazoan-dàlana voalohany kosa dia navoakan'ny kaomina, natsangan'ny Vaomiera Plenipotentiary. Ny MIA dia mamaritra ny lisitry ny lalao ho an'ny andrimpanjakana dia mifidy tanteraka ny mpiasa rehetra.
Tamin'ny 1986, lalàna manokana momba ny fitsidihana no nankatoavina ny fidirana ho an'ny vehivavy. Tsy mahazo mitondra trano filokana hiasana vola na chips ny mpiasa, fa io lalàna io dia notandremana, nanjaitra akanjo manokana tsy nisy paosy. Any Frantsa, afaka milalao manomboka amin'ny taona 18 ianao. Fandavana fidirana amin'ireo olona manao fanamiana. Ao amin'ny trano filokana rehetra dia misy lisitra mainty, izay hametraka an'i Schuler, loser ary ludomany (manan-jo amin'ny havany ny anarany), ary ireo vahiny tsy ankasitrahana hafa.
Ny Casino any France dia tsy mari-pamantarana eo an-toerana ihany, fa koa loharanom-bola mafy. Isan-taona dia an-jatony tapitrisa euro ny teti-bola. Ny hetra mandroso ho an'ny orinasa, tombony mihoatra ny 9.5 tapitrisa Euros, dia isan-jato lehibe - 80. Ny masinina ihany no manome 50% ny karama, karatra - manodidina ny 40%, ny ambiny latsaka amin'ny latabatra roulette.
Ireo casinos malaza indrindra any Frantsa
Na dia misy kisendra amin'ny fomba ofisialy any Paris aza, mbola misy ny klioba Aviation Club de France , izay namela lalao sasany, toy ny poker, baccarat ary backgammon. Ity dia iray amin'ireo orinasa manintona indrindra eto amin'ny firenena, nosokafana tamin'ny 1907. Misy hatrany ny fanarahana ny kaody akanjo. Midira ao anaty trano, alao antoka fa mandalo ny fifehezana ny tarehy, ao anatin'izany ny fanamarinana ny akanjo, apetraho ny karatra club. Azonao atao ihany koa ny mandefa ny fanasan'ny tompon-karatra. Tamin'ny 2005 dia nisy ny World Poker Tour, io voninahitra io ihany no tsara indrindra amin'ny tsara indrindra.
Haingana iray hafa - ity casino ity Enghien , dia 14 km monja miala an'i Paris. Engen dia faritra fialantsasatra tsara tarehy eo amoron'ny farihy, ora ora an-trano manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 4 alina. Kompana lalao misy trano fisakafoanana, hotely, teatra ary klioban'ny fanatanjahantena. Tonga eto izy ireo hilalao roulette, lalao karatra isan-karazany ary milina slot 450.
Manana trano filokana manokana Megève , miorina ao amin'ny Mont Blanc. Ity casino ity dia mitazona am-pahatokisana ny mpitarika amin'ny resaka fidiram-bola. Tsy mahagaga izany, satria voahodidin'ny natiora tsara tarehy, tsy manome fialan-tsasatra filokana fotsiny, fa koa fotoana iray handaniana fotoana any amin'ny disko, ao amin'ny piano bar na any amin'ny trano fisakafoanana.
De Devilleville Barrière - ny casino tsara indrindra, hita ao amin'ny faritry ny morontsiraka. Miorina amoron'ny morontsirak'ilay sarimihetsika "Lehilahy sy Vehivavy" Lelouch no misy azy. Ity toerana ity dia heverina ho iray amin'ireo tsara tarehy indrindra any Frantsa.
Tower Eiffel. Adiresy: Champ de Mars, 5 Avenue Anatole France. Io no tandindon'i Paris sy France - izay milaza azy rehetra.
Archumphal Arch. Adiresy: Place Charles de Gaulle. Ny andohalambo taloha be voninahitra, namboarina tamin'ny alàlan'i Napoleon ho fankasitrahana ireo fandresena lehibe nananany.
Louvre. Toerana: Palais Royal. Iray amin'ireo tranombakoka lehibe indrindra any Eropa, miorina ao amin'ny Royal Palace.
Notre Dame de Paris. Adiresy: 6 Parvis Notre-Dame - Place Jean-Paul II. Ny fo ara-panahy Parida sy ny basilika katolika tsara tarehy.
Saha Luxembourg. Adiresy: 6e Arrondissement. Trano mahafinaritra sy zaridaina mahafinaritra, mirefy 26 hektara.
Zava-baovao mahaliana momba an'i Frantsa sy ny Frantsay
Ny anaran'ny firenena "France" dia manana fiavahana alemà mifanohitra amin'izay, avy amin'ny anaran'ny foko nonenan'i Franks io faritra io. Na dia miteny ny fiteny aza ny mponina iray manontolo ary manana Romanesque ny ankamaroany dia fiaviany Gallo-Roman, io anarana io dia nateraka noho ny fiteny alemanina.
Any Frantsa, ny trano mimanda lehibe indrindra eto an-tany - 4969.
Tany Frantsa no namorona ny sinema, bisikileta, ballet, chanson, Gothic.
Hatramin'ny 2011, ny radio sy ny fahitalavitra frantsay dia voarara amin'ny fomba ofisialy ny Facebook sy Twitter.
Niasa divay foana ny Frantsay tamin'ny misasakalina.
France - Ivotoerana ho an'ny fambolena eropeana.
Ny lehilahy Frantsay dia miteny am-bava, misafidy ireo vehivavy izay afaka hiresahanao.
Ao Frantsa, ny hetra ambony indrindra amin'ny EU.
Ny ankamaroan'ny Frantsay dia te hipetraka any Kanada.
Frantsa amin'ny sarintany Eoropa
0.1 Lisitr'ireo Topn'ny Top Casino amin'ny 10 frantsay Online
1 Lalao any Frantsa
1.0.1 Ny toerana misy an'i Frantsa, ary tantara ara-tantara fohy
1.1 Casinos sy filokana ao Frantsa
1.1.1 Ireo casinos malaza indrindra any Frantsa
1.1.3 Zava-baovao mahaliana momba an'i Frantsa sy ny Frantsay
1.1.4 Frantsa amin'ny sarintany Eoropa